I-Based Based Learning Learning Programme
Ukubandakanya abaFundi kwiZakhono zobuNtu bonke abantwana
Ukufunda ngokusekelwe kwiprojekthi kuyindlela ecacileyo yokuhlukanisa imfundo kwindawo yokufundela ngokugcwele ngokukodwa xa le klasi ibandakanya abafundi abanamakhono ahlukeneyo amaninzi, ukusuka kwi-cognitive or developmental disabled to children gifted. Ukufunda ngokusekelwe kwiprojekthi kukwahle kakhulu kumagumbi okubonelela okanye kumagumbi okufundela ayenokuthi ahlakulele amaqabane okanye inkxaso okanye ngokwaneleyo.
Kwiinkalo ezisekelwe kwiprojekthi, nokuba wena, okanye abafundi bakho, cwangcisa iiprojekthi eziza kunika inkxaso umxholo ngendlela eya kubacebisa abafundi ukuba baqhube phambili okanye baqhubeke. U mzekelo:
Inzululwazi: Yenza imodeli yombono, mhlawumbi inambuzane, kunye neleta nganye inxalenye.
Ukufunda: Yenza ishishini lorhwebo okanye iphepha lewebhu ukukhuthaza incwadi, enye enifunde kunye okanye enye iqela elilifundele ingqungquthela yokubhala.
Izifundo zentlalo: Yenza umdlalo, inqaku lombuso, okanye ubonise kuRhulumente (njengaseMichigan,) ilizwe, inkqubo yezopolitiko (intlalo-ntlupheko, i-capitalism, republicism, njl) okanye imbono yezopolitiko.
Izibalo: Hlela uhambo oluya kwindawo ekhethiweyo (eParis, eTokyo) kwaye wenze uhlahlo lwabiwo lweehotele, iindiza, ukutya, njl njl.
Kwimeko nganye iprojekthi inokuxhasa nayiphi na injongo yezemfundo:
Qinisekisa ukugcinwa kokuqukethwe:
Ukufunda kweprojekthi kuye kwangqina, kwiphando, ukuphucula ukugcinwa kwengqondo kwiqela labafundi.
Xa abafundi bebuzwa ukuba basebenzise ulwazi lokuqukethwe, baqhutyelwa ukuba basebenzise izakhono zokucinga eziphezulu (i-Blooms Taxonomy) ezifana nokuVavanya okanye Yenza.
Abafundi, kungekhona nje abafundi abakhubazekileyo, bonke beza ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda. Abanye babona abafundi abanomdla, abanye bahlolisisa. Ezinye ziyakhathazeka, kwaye zifunde kakuhle xa zihamba. Abantwana abaninzi banenzuzo kwi-input input, kwaye abafundi aba-ADHD okanye iDyslexic bayazuza ngokukwazi ukuhamba njengoko beqhuba ulwazi.
Ufundisa izakhono ngokusebenzisana kunye nentsebenziswano:
Imisebenzi yengomso ayiyi kufuna amazinga aphezulu kuphela oqeqesho kunye nobuchule bezobugcisa, kodwa kunye nokukwazi ukusebenza ngokusebenzisana ngamaqela. Amaqela asebenza kakuhle xa atyunjwa ngutitshala kunye nabafundi: amanye amaqela angabelana, abanye banokukwazi ukuwela, kwaye abanye bangabakho "ubuhlobo" obusekelwe.
Ezinye iindlela zokuvavanya inkqubela phambili yabafundi:
Ukusebenzisa irubrikhi ukubeka imigangatho kunokubeka abafundi abanezakhono ezahlukeneyo kwibala lokudlala.
Ukubandakanyeka kwabafundi ngokufanelekileyo:
Xa abafundi bexhamle malunga noko benza esikolweni, baya kuziphatha kakuhle, bathathe inxaxheba ngokugcwele kwaye bancede kakhulu.
Ukufunda ngokusekelwe kwiprojekthi kuyisisombululo esinamandla kwiklasi yokubandakanya. Nangona umfundi okanye abafundi bechitha ingxenye yosuku lwabo kwiziko lokufundela okanye kwi-classroom, ixesha abachithayo kwi-intsebenziswano esekelwe kwiprojekthi iya kuba lixesha apho ngokuqhelekileyo ukukhula koontanga kuya kubonisa imodeli yokufundela kakuhle kunye nokuziphatha kwezemfundo. Iiprojekthi ziyakwazi ukunika abafundi abanesakhono ukunyusa imida yabo yezifundo kunye neengqondo. Iiprojekthi ziyamkeleka kuwo onke amanqanaba, xa zidibana nomqathango omiselwe kwi rubrikhi.
Ukufunda okusekelwe kwiprojekthi kusebenza kakuhle kunye namaqela amancinci abafundi.
Ukucatshulwa ngasentla ngumzekelo wesilinganiselo wesistim somhlaba omnye wabafundi bam abane-Autism adalwe nam: Sasiqikelele isiqingatha kunye, silinganisa ubukhulu beeplanethi, kwaye silinganisela imida phakathi kweeplanethi. Ngoku uyazi umyalelo weeplanethi, umahluko phakathi kweeplanethi ezisemhlabeni kunye neendawo ezinokutsha kwaye unokukuxelela ukuba kutheni amaninzi amaplanethi ayinakuhlala.
Indlela yokwenza uRubric yokuhlukana
Cinga-Tac-Toe: Isicwangciso sokuhlukana
Iimpawu kunye nenkcazelo ye-Irlen Syndrome
Print_r () Umsebenzi we-PHP
Biography kaJessie J
I-Aquarius Teen - Izibonakaliso zeZodiac
Imbali yoLuhlu lweMifanekiso
Iingoma eziyi-100 eziphezulu zeengoma zengoma 2006
URobert Sengstacke Abbott: Umshicileli we "Chicago Defender"
Iingcebiso Zokukhuthaza Abafundi
Hlangana noHarper Lee: 9 Iinkcukacha malunga 'nokubulala umlobi weMockingbird'